Best ROMS Custom Android
Haddii aad daalan tahay ciyaaro ee ROM stock qalab Android aad la yimid, oo dooneysa in ay la kulmaan wax ka duwan ama xataa samaysaa saldhigyo caadadii, markaas waa waqti ku haboon in la qaato mashruuc oo badan oo ku saabsan ROMS caadadii Android og. The ROMS caadadii Android ku siin karaa xoriyad badan oo waxaad bixisaa aad cusbooneysiisaa sida Android 5.0 qalabka hore oo aan heli doontaa Ota ah (Over Air) oo ka manufactures. Fiiro gaar ah: Baro guud Qaamuus yaraha erayada Android ka hor in ay ka fogaadaan dhibaatooyin marka flash caado Android ROM .
Waxaan sameeyey ah cilmibaarisyadii u yar oo ku saabsan qaar ka mid ah ROMS caadadii Android oo jeclaan lahaa in aan kula wadaagi ah qaababka ugu muhiimsan ee iyaga ka mid ah, iyo rajaynaynaa in ay kaa caawin kartaa in aad dooratid loo baahan yahay ROMS caadadii Android.
CyanogenMod dhab ahaantii waa mid ka mid ah ROMS ugu caansan caadadii Android oo caalamka ah, waxa ay bixisaa tan oo muuqaalada weyn sida taageero ay u OpenVPN, taageero u mawduucyada bixi karo iyo qalabka gaarka ah oo dheeraad ah. Waa ROM aad u caado taageertaa qalabka ugu iyo 12 million ku rakibtay firfircoon dad faro badan oo ah qalabka sida ay sheegtay tirakoobka ku saabsan June 2014. Ogow: Hubi qalabka taageereen u CyanogenMod halkan .
MIUI waa ROM caadadii Android ay diyaariyeen Tech Xiaomi ee Shiinaha, laakiin kooban u badan oo ka mid ah dalalka iyo luqado iyadoo la kaashanayo taageerayaasha. Waa mid ka mid ah ROMS ugu kartoo, xarrago iyo si degdeg ah, oo waxay bixisaa taageero xoog theme, barnaamijyadooda stock qurux badan, lockscreens customizable oo dhamaystiran xidid helaan. Fiiro gaar ah: Hubi qalabka taageereen u MIUI halkan .
Khayaano Android waa ROM caado lagu doonayo in la kordhiyo nidaamka, ka shaqeeya hagaajinta quruxda hore u jiray ee Android oo raac xeerarka loogu talagalay by Google. Waxay ka dhigaysa ROM ee stock Google dheeraad ah oo qurux badan, laakiin aad u baahan tahay si ay u la kulmaan naftaada si aad u ogaato quruxdiisa. Fiiro gaar ah: Hubi taageeray qalabka rasmi ah iyo dhaxalka u khayaano halkan iyo halkan .
The Android Open Kang Project ROM waa arrin ku cusub marka la barbar dhigo ROMS dheer jiray badan sida CyangenMod, iyo dad badan oo si qalad ah u arkaa in ay CyangenMod ay indhaha ku hayaan hore, laakiin run ahaantii waxa marks sare ah iyadana iyo qalabka sida toggles caadadii kasbadeen, gacanta ku LED iyo giraan navigation oo CyangenMod ma lahayn. Waxaa si degdeg ah, oo deggan iyo waddaa on 3.5 million qalabka sida ay sheegtay tirakoobka ku saabsan Sept 2013 Ogow: Hubi qalabka taageereen u AOKP halkan .
Magaca Slim ROM horeba kuu sheegayaa waxa feature ugu muhiimsan waxa agtiisa ah. Waa rakibo ah super khafiif ah oo fudud kaas oo diiradda saarayaa falinjeeerka qaababka aan loo baahnayn oo uu idin ​​wada siiyo deegaan nadiif ah oo degdeg ah. Laakiin ay taageerto qalab yar Samsung oo kaliya sababtoo ah waxaa jira sameeysa kaliya hal gadaashiisa. Xusuusnow: Hubi qalabka taageereen u Slim ICS halkan .
6. Liquid siman
Liquid siman yahay mid ka mid ah ugu dhaqsiyaha badan ROMS ICS caadadii taas oo xitaa si ka dhaqso badan saamiyada ku rakibi on Nexus Samsung ah. Waxaa yar laakiin fiican, ka tago meel dheeraad ah oo Chine iyo xataa uu leeyahay taageero theme si aad u astaysto. Haddii hawlgalka siman yahay oo dhan aad u baahan tahay iyo qalab aad ayaa sidoo kale taageeray, waxaa laga yaabaa inaad isku day ah. Fiiro Gaar ah: Hubi qalabka taageereen u Liquid siman ee forum rasmi ah .
Sida Shakespeare yiri, waxaa jira kun Hamlets ee indhaha kun dadka, sidaa darteed waxa ay kula tahay? Fadlan nala wadaag fikradaada ku saabsan aad jeceshahay ROMS caadadii Android.